Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) ဆိုတာဘာလဲ
Glycine Propionyl-L-Carnitine အဆိုပါ propionyl-L-carnitine နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ် glycine ၏မော်လီကျူးကပ်လျက်တည်ရှိအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်မိသားစုအတွင်းရှိ Carnitine နှင့်ခွဲခြားထားပြီး Creatine တည်ထောင်ခြင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) သည် antioxidant တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များအားတိုက်ထုတ်သည့်အပြင် lipid peroxidation ကိုကာကွယ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည် mitochondria ထဲသို့ရှည်လျားသောကွင်းဆက်ဖက်တီးအက်စစ်များပို့လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကူညီသည်။ ၎င်းသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရာတွင်ကူညီပေးသည် - carnitine သည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုနှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ GPLC သည်ကြွက်သားများကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဟုယူဆပြီးစွမ်းဆောင်ရည်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်သည်။ ဖြည့်စွက်ဆေးသည်အခြားဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်လည်းတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ယောက်ျားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ကိုအထောက်အကူပြုသော propionyl-l-carnitine l-arginine နှင့် niacin ။ သို့သော်အလွန်အကျွံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်သင့်ဆရာဝန်ထံမှမှန်ကန်သောဆေးသောက်ပါ။
Propionyl-l-carnitine အမှတ်တံဆိပ်များ၊ 3-propanoyloxy-4- (trimethylazaniumyl) butanoate, Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9), L-carnitine propionyl, PLC, LPC နှင့် Glycine propionyl-L-Carnitine Hydrochloride ။ The အစားအစာဖြည့်စွက် သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအောက်တွင်ရောင်းချသည်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျနှောင့်အယှက်မဖြစ်သင့်; ဆေးများသည်၎င်းကိုဝယ်ယူရန်လမ်းညွှန်ပေးသင့်သည်။
ဒီဖြည့်စွက်ချက်ကိုအွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးမျိုး၌သင်ရရှိနိုင်တယ်။ ဥပမာ၊ propionyl-l-carnitine Walmart သည်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလတိုအတွင်းကယ်လွှတ်ပေးသည်။ သင်၏မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကို သုံး၍ ယနေ့ propionyl-l-carnitine Walmart မှာယူသည်မှာအရေးမကြီးပါ။ သင်၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချမီရရှိနိုင်သည့် glycine propionyl ရောင်းချသူများနှင့်သင်၏သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းသည်အကြံပြုလိုပါသည်။ ရောင်းချသူများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုမည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရန် propionyl-l-carnitine Reddit ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ပါ။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ရိုးသားသောထင်မြင်ချက်ကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီစေရန်အထောက်အကူပြုမည့်အရည်အသွေးပြည့်ဖြည့်စွက်စာကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရနိုင်သည်ကိုသင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။
L-Carnitine vs. Glycine Propionyl-L-Carnitine
GPCL ကို Carnitine's propionyl ester ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည် glycine ၏အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ တစ်ရှူးများ esterase ၏အင်ဇိုင်းများကြောင့် Glycine Propionyl-L-Carnitine testosterone သည် prodrug ၏အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပြီးလူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ glycine, Carnitine နှင့် propionic acid ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Glycine Propionyl-L-Carnitine နှင့် L-Carnitine တို့သည်အထူးသဖြင့်ရှုထောင့်တစ်ခုနှင့်မတူပါ။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကူညီပေးသည်နှင့် ကြွက်သားကြီးထွား။ Glycine propionyl-L-carnitine စစ်ဆေးခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အားနှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါများမှပြန်လည်သက်သာလာစေရန်ကူညီပေးသည်။
L-Carnitine သည်ခြေထောက်၏နာကျင်မှုနှင့်နှလုံးရောဂါတို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ L-Carnitine သည်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9) သည်မော်လီကျူးဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် Glycine Propionyl-L-Carnitine testosterone သည်ရောဂါတိုက်ဖျက်နေစဉ် L-Carnitine သည်ရောဂါများကိုကုသပေးသည်။
Glycine Propionyl-L-Carnitine သက်ရောက်မှုများ
အောက်ပါများမှာ glycine propionyl L carnitine အကျိုးခံစားခွင့်:
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေး. Propionyl-L-carnitine သည်ခန္ဓာကိုယ်အားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။ အခြားခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်များအကြားသင့်လျော်သောနှလုံးလည်ပတ်မှု၊ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသွေးလည်ပတ်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းအတွက်လည်းတာဝန်ရှိသည်။
အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကုသ. အိုမင်းခြင်းသည်အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းနည်းစေနိုင်သည်။ acetyl-L-carnitine ကိုခြောက်လထိုးနှက်သည့် Propionyl-L-carnitine သည်နိမ့်ကျသောကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအသက်ကြီးသူများတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။ ဒီပေါင်းစပ်နည်းဒြပ် testosterone ဟော်မုန်းနဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ်။
အူဂျီသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်နာကျင်မှု. propionyl-L-carnitine ကိုပါးစပ်ဖြင့်သောက်ခြင်းဖြင့်အူဂျီနာရောဂါရှိသူများကိုလမ်းလျှောက်ရန်ကူညီပေးသည်။ အချို့လူများကရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။
ဒါဟာနာတာရှည် ishemes နှလုံးရောဂါကုသ. သင် propionyl-L-carnitine ကိုသွေးကြောထဲသွင်းလိုက်ရင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိသူတွေကနှလုံးစုပ်စက်ကိုကူညီပေးတယ်။
နှလုံးရောဂါ (CHF). Propionyl-L-carnitine သည်အသင့်အတင့်သို့မဟုတ်ပျော့ညံ့သော CHF ရှိသူများအတွက်တက်ကြွသော prodrug တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏နှလုံးပုံသဏ္improာန်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးရှည်လျားသောအကွာအဝေးတွင်လမ်းလျှောက်ရန်ကူညီသည်
Glycine propionyl ဌ carnitine နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု. သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ testosterone ဟော်မုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီဖြည့်စွက်ခြင်းသည် erectile ပြproblemsနာများနှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်မှုကိစ္စတိုးပွားခြင်းကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးသည်။
ED နှင့်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက် Propionyl-L-carnitine ကို Viagra (sildenafil) နှင့်မကြာခဏရောစပ်သည်။ ထို့အပြင် propionyl-L-carnitine ပါ ၀ င်သည့်တိကျသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိသည်။
အစွန်အဖျားသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ (စောင်ရေနည်းပါးခြင်း). Peripheral ရောဂါများလမ်းလျှောက်နေစဉ်ခြေထောက်တွင်သွေးပြန်ကြောသို့မဟုတ်နာကျင်မှုရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း claudication လို့ခေါ်တဲ့အခွအေနေ။ အပ်ထိုးခြင်းသို့မဟုတ် Propionyl-L-carnitine ကိုတိုက်ရိုက်စားသုံးခြင်းသည်ခြေထောက်နာကျင်မှုခံစားနေရသောလူများအားဝေးကွာသောနေရာများတွင်လမ်းလျှောက်စေသည်။
Peyronie ၏ရောဂါ (လိင်တံတစ်ရှူးများကိုခိုင်မာစေခြင်း)verapamil ဟုခေါ်သောဆေးဝါးသည် propionyl-L-carnitine နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး၊ အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ပေါင်းစပ်မှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထိုးဆေးဖြင့်ဖြစ်စေသောက်နိုင်သည်။ Peyronie ၏ရောဂါတွင်မပါရှိပါကခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Propionyl-L-Carnitine ကိုကယ်ဆယ်နိုင်သည်။
အူသိမ်အူမကြီးရောဂါ (အစာအိမ်အူရောင်ရောဂါ)။ Propionyl-L-carnitine သည်အချို့သောဆေးဝါးများအောက်၌အနာရှိသည့်အူမကြီးရောင်ရောဂါရှိသည့်လူနာများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျော့ချရန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Glycine Propionyl-L-Carnitine သုတေသနနှင့်ရလဒ်
Crohn's ရောဂါ (အူသိမ်ရောဂါ).prolimyl-L-carnitine ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Crohn ရောဂါရှိလူနာများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်ဟုပဏာမသုတေသနကပြသည်။
နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် syndrome ရောဂါ (CFS).လေ့လာမှုများအရ propionyl-L-carnitine သည် CFS လူနာများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, acetyl-L-carnitine propionyl-L-carnitine နှင့်အတူရောနှောလျှင်, ရလဒ်သီးခြားစီဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းထက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်စွမ်း။ တူးဖော်ခြင်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းစွမ်းအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအားအင်ပြည့်ဝသောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ သို့သော်သင့်လျော်သောယူပါ glycine propionyl-l-carnitine သောက်သုံးသော။ ဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် glycine propionyl-l-carnitine HCl ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊
Glycine Propionyl-L-Carnitine တွင်မည်သည့်အစားအစာများပေါကြွယ်ဝသနည်း။
Glycine propionyl-l-carnitine ကိုအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။
Glycine Propionyl-L-Carnitine ကိုယူနည်း
Propionyl-L-Carnitine ကိုဖြည့်စွက်အဖြစ်ရောင်းချသည်။ ၎င်းကိုသင်၏ဒေသဆိုင်သို့မဟုတ်ဆေးဆိုင်တွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ အားကစားသမားများသည်ခန္ဓာကိုယ်အားအကောင်းဆုံးသောကြွက်သားများလည်ပတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဆဲလ်အမြှေးပါးတွင်စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်၎င်းကိုယူခြင်းမှအကျိုးများစွာရရှိနိုင်သည်။ ဤတွင်အကြံပြုထားသည့် Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနကကျောထောက်နောက်ခံပြု) သောက်သုံးသောပမာဏ။
သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန် - တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ် ၅၀၀-၂၀၀၀ မီလီဂရမ် propionyl-L-carnitine ကိုသောက်ပါ။
CHF (နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ)၊ Angina သို့မဟုတ်ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းတို့ကိုကုသရန်၊ တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်မီလီဂရမ် 500 mg propionyl-L-carnitine ကိုသောက်ပါ။
အိုမင်းသောယောက်ျားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွားစေရန် - propionyl-L-carnitine ၂ ဂရမ်နှင့်အက်စီတလင်း -LL carnitine ၂ ဂရမ်ကိုနေ့စဉ်သောက်ပါ။
ဂလိုင်ကူ propionyl l carnitine နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: နေ့စဉ်မီလီဂရမ် ၅၀ မီလီဂရမ်နှင့်ရောနှောထားသော propionyl-L-carnitine ၏နေ့စဉ် ၂ ဂရမ်ကိုယူပါ။ အပတ်စဉ်နှစ်ကြိမ်ပေးထားသည်။ တိကျသော propionyl-L-carnitine l-arginine နှင့် niacin ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင်၏လိင်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ဆေးညွှန်းတွင် 250 mg fir propionyl-L-carnitine နှင့် niacin အတွက် 20mg ဖြစ်သင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တစ်နေ့လျှင် arginine 2500 မီလီဂရမ်နှင့်အတူဖြည့်စွက်ယူနိုင်ပါတယ်။
Peyronie's ရောဂါအတွက်နေ့စဉ် propionyl-L-carnitine ၏2ဂရမ် verapamil ဟုခေါ်သောဆေးကိုထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်သည်။
အစာအိမ်နာအူမကြီးရောင်ခြင်းအတွက် - နေ့စဉ်နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ် propionyl-L-carnitine ၏ 0.5-1 ဂရမ်။
သငျသညျ l-carnitine နှင့် Cialis ကိုလည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံအတွက်ဆေးပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှမှန်ကန်သောဆေးညွှန်းကိုရနိုင်သည်။
နှလုံးရောဂါနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် - ကျန်းမာရေးအထူးကုများသည် propionyl-L-carnitine ဆေးထိုးခြင်းကို IV ဟုခေါ်သည်။
Glycine Propionyl-L-Carnitine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ & ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
ပါးစပ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ဆေးကြောလျှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆရာဝန်တစ် ဦး ကလူများ၏ propionyl-L-carnitine သည်ပိုမိုလုံခြုံသည်။ ၎င်းသည်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသက်ရှုခြင်း၊ ဆီးခြင်း၊ ချွေးခြင်းများကိုအနံ့ဆိုးထွက်စေသည်။
ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးသူများ၊ propionyl-L-carnitine ကိုနို့တိုက်သို့မဟုတ်မိခင်များအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည်။ သတိဖြင့်ရှေ့ဆက်နှင့်အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
"underactive သိုင်းရွိုက်" (hypothyroidism): propionyl-L-carnitine hypothyroidism ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကုသမှုလျော့နည်းထိရောက်စေလိမ့်မယ်။ L-carnitine ဆေးသည်ဓာတုပစ္စည်းသည်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ အကယ်၍ သင် hypothyroidism ရှိပါက propionyl-L-carnitine ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးရမိများ - L-carnitine ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့သမိုင်းရှိသူအနည်းငယ်ဟာပြင်းထန်မှုနှုန်းနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုအရေအတွက်တိုးများလာကြောင်းတင်ပြကြပါတယ်။ ၎င်းသည်အလားတူဓာတုဗေဒပစ္စည်းများရှိသောကြောင့် propionyl-L-carnitine နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်မှာကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
အခြားဆေးဝါးများနှင့် GPLC ၏ဆက်သွယ်မှု
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရန်သင်မစတင်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ GPLC ယူပြီး။ အကယ်၍ သင်သည် Acenocoumarol (Sintrom) ကိုသောက်နေလျှင်၊ သင့်ဆရာဝန်ကိုလည်းပါ ၀ င်သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သွေးခဲခြင်းကိုနှေးကွေးစေနိုင်သောကြောင့် GPLC သည် Sintrom ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးစေနိုင်သည်။
Warfarin (Coumadin) သည်သင် glycine propionyl-l-carnitine ဖြည့်စွက်ဆေးနှင့်သင်သောက်သုံးနိုင်သောအခြားဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အမြဲတမ်းသင့်ဆေးကိုမှန်ကန်စွာသောက်ရန်သေချာစေပါ။ ကုသမှုအောက်ရှိအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဆေးညွှန်းသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အဘယ်မှာ Propionyl-L-Carnitine ဖြည့်စွက်ဝယ်ယူရန်
အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်သင်သည် glycine Propionyl-L-Carnitine ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမှသော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ပင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ စိန်ခေါ်မှုသည်သင့်အားအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးမည့်မှန်ကန်သောကုန်သည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၌လာသည်။ များစွာရှိပါသည် glycine Propionyl-l-Carnitine အမှုန့်ရောင်းသူများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အွန်လိုင်းနှစ်ခုလုံး။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုမခြိမ်းခြောက်သင့်ပါ၊ သင်လိုအပ်သည်မှာသင်၏အချိန်ကိုယူပြီးရရှိနိုင်သည့် glycine Propionyl-l-Carnitine အမှုန့်ကုန်သည်များအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျ glycine Propionyl l-Carnitine အမြောက်အများအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ရုံအလုံအလောက်။ glycine propionyl-L-carnitine အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်အတွက်ဆရာဝန်တစ် ဦး ထံမှမှန်ကန်သောဆေးသောက်ရန်အမြဲတမ်းသတိရပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရန် propionyl-l-carnitine Redditreviews ကိုလေ့လာရန်စဉ်းစားပါ။ သင်တို့သည်အခြားဖြည့်စွက်များအကြား, အတူတူရောင်းသူထံမှ l carnitine နှင့် Cialis ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Propionyl-l-carnitine အမှတ်တံဆိပ်များသည်တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာကွဲပြားသော်လည်း၎င်းသည်တူညီသောဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ အမိန့်မချမှတ်ခင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတည်ပြုပါ။
Stasi, MA, Scioli, MG, Arcuri, G. အ, Mattera, GG, Lombardo, K. , Marcellini, M. , ... & Borsini, F. (2010) ။ Propionyl-l-carnitine သည် posthemhemic blood flow recovery နှင့် arteriogenesis revascularization ကိုတိုးတက်စေပြီး endothelial NADPH-oxidase 4-mediated superoxide ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Arteriosclerosis, thrombosis နှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒ, 30(3), 426-435 ။
Gianfrilli, D. , Lauretta, R. , Di Dato, C, Graziadio, C, Pozza, C, De Larichaudy, J. , ... & Lenzi, A. (2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအတွက် propionyl fi ဌ carnitine, ဌ ‐ arginine နှင့် niacin: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခု nutraceutical ချဉ်းကပ်မှု။ Andrologia, 44, 600-604 ။
Flayyih, NK (2015) ။ L-carnitine ၏သက်ရောက်မှုသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်များအားမျိုးပွားစွမ်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သိပ္ပံ & ဆေးပညာသည် Wassit ၏ဂျာနယ်, 8(1), 97-104 ။
၁။ Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) ဆိုတာဘာလဲ။
L-Carnitine vs.Glycine Propionyl-L-Carnitine
3.Glycine Propionyl-L-Carnitine သက်ရောက်မှုများ
4.Glycine Propionyl-L-Carnitine သုတေသနနှင့်ရလဒ်
၅။ Glycine Propionyl-L-Carnitine တွင်မည်သည့်အစားအစာများပေါကြွယ်ဝသနည်း။
၆။ Glycine Propionyl-L-Carnitine ယူရန်
7.Glycine Propionyl-L-Carnitine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ & ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
၈။ GPLC ၏အခြားဆေးဝါးများနှင့်ဆက်ဆံမှု
9. Propionyl-L-Carnitine ဖြည့်စွက်စာကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ